Xukuumadda R/wasaare Gaas oo tacsi u dirtay qoyska Mrs. Marie Dedieu, muwaadinad Faransiis ah oo ku geeriyootay Somaliya. – Radio Daljir
Xukuumadda R/wasaare Gaas oo tacsi u dirtay qoyska Mrs. Marie Dedieu, muwaadinad Faransiis ah oo ku geeriyootay Somaliya.
Oktoobar 19, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Oct 19 – War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wacyigelinta bulshada ee wasaarada warfaafinta ee xukuumada federaalka ah ee Somaliya ayaa looga tacsiyadeeyey ehelada iyo asxaabta Mrs. Marie Dedieu, muwaadinad Faransiis ah oo ku geeriyootay Somaliya.
R/wasaare C/wali Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay geerida Marie Dedieu ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay geerida Mrs. Dedieu, ayna ku rajo weynaayeen in iyada oo bed qabta la soo furan doono.
?Aad baan uga xunnahay geerida ku timid Marie; waxaan tacsi u direynaa qoyskii iyo asxaabtii ay ka geeriyootay” ayuu yiri R/wasaare Gaas.
?Waxaan ka shaqeyneynay oo aan rajeyneynay in la soo daayo. Nasiib darro, argagixiso ku xiran Al-Qaacida iyo burcad-badeed ayaa khatar u haya nabadgelyada Soomaaliya, gobolka iyo caalamkaba. Xukuumaddeyduna waxay ka shaqeyn doontaa sidii caddaaladda loo horkeeni lahaa dadkii ka dambeeyay falkaas.? ayaa uu ku daray R/wasaare Gaas.
Lama hubo sida ay u geeriyootay Mr. Dedieu, walow la sheegay in ay u badan tahay in ay dacdaro, daryeel iyo dawo la’aan ay u iilatay; Mrs. Dedieu ma aanay socon karin, caafimaadkeeduna ma wanaagsanayn in muddo ah.
Mrs. Dedieu oo dhalashadeedu tahay Faransiis ayaa laga afduubay jasaa’irka Manda ee dalka Kenya bishii Septembar, lana soo galay Somaliya. Waxaa la tuhunsan yahay in ay afduubeen xookaha burcad badeedka ah ama kooxa diimeedka xag jirka ah.
Waxaa jiray isku-dayo ay wadeen ciidanka Kenya oo la doonayey in lagu soo furto Mrs. Dedieu, aanse lagu guulaysan.
Mrs. Dedieu waxaa ay ku noolayd dalka Kenya muddo ka badan 15 sano.
Ciidan bilays iyo turbataariyo iskugu jira oo maanta lagu wareejiyey fariisimadii Garsoor; Afhayeenka baarlamaanka Puntland iyo wasiirro goobjoog ka ahaa.
Baahin: Salaasa, Oct 18, Weriye Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Wasiirada arrimaha dibedda & gaashaandhiga ee Kenya oo Muqdisho kulamo kula yeeshay madaxda dawlada federaalka; Gen. Ilkajiir, wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland oo ka dayriyey dagaal-beeleedyada soo noqnoqda ee ka dhex dhaca beelaha Puntland; Maxkamada darajada 1-aad ee Garowe oo dil ku xukuntay C/llahi Cabdulle Iimaan oo qirtay in uu ka tirsan yahay Al-shabaab, gaystayna falal dil & dhaawac isugu jira.